ဆောင်းယွန်းလ – သစ်ကောင်းအိမ်နဲ့ ရေးမိတဲ့ကဗျာ | MoeMaKa Burmese News & Media
ဆောင်းယွန်းလ – သစ်ကောင်းအိမ်နဲ့ ရေးမိတဲ့ကဗျာ
(မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၅
မထူးတဲ့ လူတွေနဲ့ 
မခြားနားတဲ့ ဇာတ်နဲ့ 
နေသာတဲ့ နေရာနဲ့ 
မီးကို မီးနဲ့ လောင်ကျွမ်းပြာကျစေလိုက်တယ်….
ကိုယ့်တရားနဲ့ ပေါင်းစပ်လိုက်မိတဲ့ ကဗျာတပုဒ်ပဲ….
ငါလည်း အဲဒီအတိုင်းပဲ ဇော်ကြီးရေ
စီးကရက်ကို မီးမပြတ်တမ်း ဖွာကြရအောင်…..